Wararka - [Talooyinka Keydinta Shidaalka] Isticmaalka shidaalka qodista waa mid aad u kala duwan, farqiga u dhexeeya darawalada cusub iyo kuwii hore ayaa aad u weyn?
[Talooyinka Keydinta Shidaalka] Isticmaalka shidaalka qodista waa mid aad u kala duwan, farqiga u dhexeeya darawalada cusub iyo kuwii hore ayaa aad u weyn?
Farqiga udhaxeeya layliska iyo wadaha duugga ah kuma koobna oo kaliya tikniyoolajiyadda, laakiin sidoo kale faahfaahinta maalinlaha ah…
Markaad la macaamilayso xaalado shaqo oo kala duwan, darawalada ruug cadaaga ahi waxay si sahal ah u xakamayn karaan khibradooda hodanka ah si ay u hubiyaan habsami u socodka shaqada, wayna ka fiican yihiin darawalada khibrada leh marka la eego keydinta shidaalka iyo walwal la’aan.
Marka, maxay ku kala duwan yihiin wadaha cusub iyo darawalkii hore ee ka shaqeynayay qodista?
Yaree qulqulka qodista
Hawlgalka dhabta ah, waxaan ku ogaan doonnaa sababta oo ah waalka badbaadada ee wareegga haydhka ayaa furan, mar haddii qulqulatadu dhacdo, xitaa haddii aad kordhiso gaaska, awoodda qodista ma kordhin doonto inta lagu jiro hawlgalka dhabta ah, sayidkuna ma sii dheereyn doono ku dhaqaaq , Haddii aad sii waddo tallaabadaada, saliid badan ayaa lumin doonta.
Xulo goobta shaqada saxda ah
Darawallada khibrada leh ee khibrada leh ayaa dooran doona booska ku habboon markay soo galayaan goobta, si ka duwan kuwa cusub ee soo gala goobta iyagoon dooran. Waxay dooran doonaan dherer la mid ah kan gawaarida gawaarida lagu rakibo si loo yareeyo dhererka qodista inta lagu jiro hawlgalka, la gaabiyo masaafada hawlgalka, iyo si dabiici ah looga fogaado qashinka shidaalka.
Dabcan, waxaa jira faahfaahin badan oo yar oo ku saabsan keydinta shidaalka. Ilaa iyo intaad xoojineyso barashadaada maalinlaha ah isla markaana aad soo koobeyso talooyinkaaga keydinta shidaalka ee shaqada, waxaan aaminsanahay inaad dhowaan noqon doonto darawal duq ah oo keydka shidaalka iyo walwal la’aanta!